NextMapping | Tababarka Hoggaanka
Tababbarka hoggaaminta ee NextMapping ™
Mustaqbalka shaqadu wuxuu ubaahanyahay xirfado cusub oo hogaamiyayaal iyo kooxeed ah.
Shirkadaha sida Amazon ayaa balaayiin ku maalgelinaya kor u qaadida iyo dib u buuxinta shaqooyinka. Ujeeddada joogitaanka mustaqbalku waxay ku socotaa loo shaqeeyaha iyo shaqaalaha labadaba tanina waxaa ka mid ah diiradda lagu saarayo waxbarashada cimriga dheer.
Si loo sameeyo hoggaamiyeyaal isbeddel wax ku ool ah oo awood leh iyo xubnaha kooxda waa inay sameeyaan dabeecad shaqsiyadeed isbadal. Sida ugu wanaagsan ee dabeecadda loo beddelo ayaa ah ku celcelinta barashada oo ay weheliso waqtiga dhabta ah ee loo adeegsado wixii la bartay.
Tababbarka hoggaaminta NextMapping ™ waxaa laga heli karaa gabi ahaanba Zoom, Koorsooyinka khadka tooska ah ee internetka ayaa diiradda lagu saaray mustaqbalka shaqada iyo sidoo kale tabobar la habeeyay oo lagu bixin karo websaydh ama calaamad cad oo loogu talagay boostooyinkaaga.
Maxay u ekaan doontaa 2030 ...
… Haddii aad sare u qaadday maalgashigaaga horumarinta xirfadaha sare ee kooxahaaga?
Adiga iyo hoggaamiyeyaashaada mustaqbal ma maskaxda ku heysaan?
Xaqiiqada deg degga ah ee goobta shaqada maanta faa iidada ugu weyn ee tartanku waa shirkada leh hogaamiyaasha iyo kooxaha horumaray badankood.
Muxuu yahay qorshahaaga si aad u hubiso in dadkaagu ay haystaan ​​tababbarka ugu dambeeyay uguna dambeeyay casriyeynta iyo kobcinta xirfadaha si ay ula jaan qaadaan isbedelka socda iyo baahiyaha wershadahaaga?
Cilmi baaris ayaa muujisay in Millenials iyo Gen Z's ay waqti dheer la sii joogi doonaan shirkadaha bixiya fursadaha waxbarasho ee joogtada ah iyo fursadaha horumarineed iyada oo loo marayo tababar.
Cilmi baaristu waxay sidoo kale muujineysaa in shaqooyinka caadiga ah iyo doorarka hore ay noqon doonaan wax la soo dhaafay iyo in goobaha shaqooyinka mustaqbalka ay lahaan doonaan isku darka waqti buuxa, waqti dhiman iyo shaqaale madax banaani ah.
Xirfadaha loo baahan yahay ...
Xirfadaha loobaahanyahay sidii lagu raadin lahaa mustaqbalkan isbedelaya waxaa kamid ah:
Awoodda lagu maareeyo macluumaad fara badan iyo in la garto habka ugu wanaagsan ee wax loo qabto
Awoodda aad ku hoggaamin karto isbeddelka geesinimada, jihada, go'aan qaadashada iyo aragtida
Awoodda lagu fahmo duruufo badan iyo in lala xiriiro la-hawlgalayaal kala duwan
Awoodda iskaashi iyo hal-abuur leh dad kala jaad ah oo leh shakhsiyado kaladuwan
Awoodda looga faa'iideysan karo tikniyoolajiyadda iyadoo diiradda la saarayo 'dadka marka hore'
Awoodda looga faa'iideysan karo mustaqbalka aasaasiga ah ee xirfadaha shaqada ee 'xirfadaha isdhexgalka aadanaha'
76% ka mid ah agaasimayaasha guud ayaa sheegay mustaqbalka soo socda ee horumarinta xirfadaha diyaar u ah hogaamiyaasha iyo kooxaha oo ah aaga ugu weyn ee diirada la saarayo maadaama aan ku wajahan nahay 2030
70% ururada waxay tilmaamayaan nusqaamaha awooda inay tahay mid ka mid ah shanta caqabadood ee ugu sareysa.
Kaliya 49% shaqaalaha waxay yiraahdaan shirkadahoodu waxay bixiyaan tababar xirfado iyo fursado koritaan.
Qaab cusub oo loogu talagalay horumarinta xirfadaha
Qaababka tababarka dhaqameed ee la soo dhaafay uma socdaan inay u diyaariyaan hogaamiyaasha iyo kooxaha mustaqbalka.
Hab cusub oo loo maro horumarinta xirfadaha ayaa loo baahan yahay - habka cusub waxaa ku jira manhaj ku xiran xaaladaha waqtiga dhabta ah ee shaqada. NextMapping TM la-taliyayaasheena waxaa lagu aqoonsan yahay istiraatiijiyado tababar oo la jaan qaadaya nidaamkayaga NextMapping ™.
Si loo sameeyo tababarka 'dhejis' geeddi-socodkeena lahaanshuhu wuxuu hubiyaa heerka 90% ++, boqolkiiba 70% dalab ku saabsan tababarka boostada shaqada iyo horumarin la qiyaasi karo muddo dheer oo ku saabsan waxqabadka shaqada.
Natiijada dhameystirka barnaamijyada tababarka waxaa ka mid ah:
Kordhinta koritaanka ganacsiga sida hogaamiyayaasha iyo kooxaha xirfadaha xirfadaha ayaa kordha
Kordhinta hal abuurka iyo wada shaqeynta ka dhexeysa hoggaamiyeyaasha iyo kooxaha
Kordhinta xalka macmiisha hal abuurka leh sababtoo ah xubnaha kooxda oo xirfad sare leh iyo karti xoog leh
Kordhinta dhiirrigalinta iyo hawlgelinta dhammaan shaqaalaha
Kordhinta kartida shaqaaleynta iyo xafidida kartida kartida badan leh
Hoggaaminta oo la kordhiyay iyo isku-duubnaanta kooxda si loo abuuro himilo mustaqbal diiradda lagu saarayo iyo himilooyin
Waxaan bixinaa hogaaminta iyo barnaamijyada tababarka kooxda iyadoo la adeegsanayo habab kala duwan oo gaarsiin ah oo ay kujirto shaqsi ahaan, iskuduwaha Zoom ama WebEX, tababarka fiidiyowga tooska ah iyo ciyaarta.
Dhamaan ardayda ka qalin jabisa barnaamijyadeena waxay helaan shahaadada dhameystirka NextMapping ™.